အကြင်နာတရားဆိုတာ...မျက်စိမမြင်သူကိုလည်း မြင်စေနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုပါ။.... ~ ITmanHOME
12:01 knowledge, ဟာသ No comments
အကြင်နာတရားဆိုတာ...မျက်စိမမြင်သူကိုလည်း မြင်စေနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုပါ။....
ဘ၀ဆိုတာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ။ ဂီတရှိတယ်။ သံစဉ်ရှိတယ်။ စာသားရှိတယ်။
သီဆိုတဲ့သူရှိတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်။ မကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်။
တစ်ခါကျရှုံးရင် သင်ခန်းစာယူဖို့ပြောလိုက်ပါ။ နှစ်ခါကျရှုံးရင် တန်ဖိုးထားဖို့ပြောလိုက်ပါ။
~ ဘ၀မှာ အသိတစ်ချို့ ရဖို့ အတွက်
ခွန်အားနဲ့ရင်းခဲ့ရတယ် ။
ငွေအားနဲ့ ရင်းခဲ့ရတယ် ။
အချိန်များနဲ့ရင်းခဲ့ရတယ် ။
နှလုံးသားနဲ့ ပါ ရင်းခဲ့ရတယ် ။ ~
ငယ်ရွယ်လှပသော မိန်းကလေး တစ်ယောက်နှင့် သူဧ။် အူတူတူ အ တတ ခင်ပွန်းတို.သည်
ဦးဦး မှော်ဆရာ နှင့်အတူ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သို. ရောက်ရှိသွားလေသည်။
နံနက်ခင်းတွင် ဦးဦး မှော်ဆရာ က အုန်းပင်အမြင့်ကြီးပေါ်သို.တက်သွားပြီး
အပေါ်ရောက်တဲ့ခါ အောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီး အော်ပြောလိုက်သည် ။
"ဟေ့လူတွေ နေ.ခင်:ကြောင်တောင် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ၊ မကောင်းပါဘူးဗျာ ၊ ဆင်ခြင်နေမှပေါ့ "
မကြာခင် ကျနော် အုန်းပင်ပေါ်က ဆင်းလာသောအခါ လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက မေးသည် ။
" ခင်ဗျား ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ၊
ကျုပ်တို.ဘာသာ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေကြတာပဲ ၊ဘာမှလဲ မလုပ်ရပါလား "
" ဆောရီးဗျာ ၊ အုန်းပင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါ အောက်ကို လှမ်းကြည့်ရင် အဲဒီတိုင်းမြင်နေရလို.ပါ ၊
ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ် "
ထိုသို.နှင့် နေ.စဉ် နံနက်တိုင်း ဦးဦး မှော်ဆရာ ထို အုန်းပင်ပေါ်သို.တက်ပြီး
အပေါ်သို.ရောက်တိုင်း ထိုသို.အော်ဟစ်နေလေသည် ။
နောက်ဆုံးတွင် လင်ယောက်ျားက သူကိုယ်တိုင် အုန်းပင်ပေါ်သို. တက်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
သို.နှင့် အုန်းပင်ပေါ်သို. ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားပန်းစားတက်ရာ နောက်ဆုံး အုန်းပင်ပေါ်သို.ရောက်သွားသည် ။
ထိုအခါကျမှ သူ.နှုတ်မှ ရေရွတ်ပြောဆိုလိုက်သည်မှာ ..
" ဟာ .. ဟို မှော်ဆရာ ပြောတာ မှန်သားပဲ ၊ အောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့
သူပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲလား " ဟူ သတဲ့ ။